व्हीलचेयर कुशन AEGIS® उपचार ब्याक्टेरियल विरोधी - Karman हेल्थकेयर
घर / पसल / म्यानुअल व्हीलचेयर / व्हीलचेयर सामान / व्हीलचेयर कुशन
सीट र पछाडि रंग *
सुन्तला Emola मात्र १ 16 र १ inch इन्च सीट आकार मा उपलब्ध छ
एक विकल्प चयन गर्नुहोस् ... ग्रे सुन्तला इमोला बैजनी
एक विकल्प चयन गर्नुहोस् ... १″ ″ x16 ″ १″ ″ x18 ″ १″ ″ x20 ″
कुनै पनि 100 शृंखला 300 शृंखला
विरोधी जीवाणु कुशन मात्रा
SKU: 810058400499 विभाग: पछाडि र कुशन, पछाडि कुशन, कुशन कभर, फोम, मेमोरी फोम, सीट, व्हीलचेयर कुशन, व्हीलचेयर पार्ट्स सहायक उपकरण, व्हीलचेयर असबाब र सीटहरु
व्हीलचेयर S-ERGO १०० वा ३०० श्रृंखला को लागी कुशन
सबै भन्दा राम्रो पाउनुहोस् व्हीलचेयर तपाइँको ईर्गो को लागी कुशन। चाहे तपाइँ नियमित हुनुहुन्छ व्हीलचेयर, Ergo मोडेल वा 100/300 श्रृंखला व्हीलचेयर, तपाइँ तपाइँको लागी एक S-ERGO प्रतिस्थापन वा नयाँ विज्ञापन प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ व्हीलचेयर। Aegis उपचार विरोधी माइक्रोबियल बस्ने प्रणाली को एक धेरै छ लाभ.
Aegis विरोधी माइक्रोबियल उपचार व्हीलचेयर कुशन हल्का समर्थन र स्थिति आवश्यकताहरु संग व्यक्तिहरु को लागी एकदम सही छ। यो बढेको आराम र समर्थन प्रदान गर्न को लागी डिजाइन गरीएको हो प्रयोग एक मिसिन धुने योग्य र सास फेर्न फोम को दृढता को लागी सामग्री। यो जो दबाब राहत को लागी आफ्नो वजन शिफ्ट प्रदर्शन गर्न सक्षम छन् को लागी ठूलो सहायता हो।हाई एजिस को उपयोग गर्नुहोस् व्हीलचेयर कुशन?
Aegis विरोधी माइक्रोबियल उपचार व्हीलचेयर कुशन हल्का समर्थन र स्थिति आवश्यकताहरु संग व्यक्तिहरु को लागी एकदम सही छ। यो बढेको आराम र समर्थन प्रदान गर्न को लागी डिजाइन गरीएको हो प्रयोग एक मिसिन धुने योग्य र सास फेर्न फोम को दृढता को लागी सामग्री। यो जो दबाब राहत को लागी आफ्नो वजन शिफ्ट प्रदर्शन गर्न सक्षम छन् को लागी ठूलो सहायता हो।
किन Aegis प्रयोग गर्नुहोस् व्हीलचेयर कुशन?
Velcro No-slip तल र पछाडि
टेम्पर्ड polyurethane फोम
सास फेर्न, पानी-विकर्षक जाल कपडा
सजीलै संलग्न र हटाउन सकिने
AGEIS उपचार व्हीलचेयर कुशन
डिजाइनर शैली र रंग
S-105 को लागी प्रतिस्थापन कुशन, 106, ११५, ११५-टीपी, १२५. एस -३०५
धेरै S-ERGO श्रृंखला अल्ट्रालाइट व्हीलचेयर एक संग मानक आउनुहोस् AEIGIS® उपचार गरियो विरोधी माइक्रोबियल लेपित बस्ने प्रणाली जो सजीलै हटाउन सकिने र संग जोडिएको छ व्हीलचेयर वेल्क्रो द्वारा। अन्य S-ERGO लाइनहरु सजीलै धुने को लागी हटाउन को लागी एक पेंच चालक को आवश्यकता हुन सक्छ प्रणाली मा निर्मित प्रदान गर्दछ। यो १/२ ″ कुशन एक लामो lasing टिकाऊ कुशन सुनिश्चित गर्न को लागी उच्च सिलाई संग माइक्रोफाइबर अतिव्यापी फोम को एक बहु परत मा बस्छ।
यो ब्याक्टेरिया विरोधी हो व्हीलचेयर कुशन उच्च breathability अनुमति दिन्छ हावा एस आकार आसन प्रणाली को माध्यम बाट permeate अनुमति दिन्छ प्रयोगकर्तालाई आराम थप्न। हावा गर्मी र आर्द्रता को परिवेश को तापमान मा नष्ट गर्न को लागी ड्राइविंग बलहरु लाई अनुमति दिन को लागी डिजाइन गरीएको थियो। यो को बढावा गर्न को लागी हाम्रो प्रयास को लागी सीट कुशन कोटिंग द्वारा सम्भावित जीवाणु निर्माण को प्रतिरोध AEIGIS® यो सबै भन्दा राम्रो छनौट गर्दछ। यो उत्तम मिश्रण र एक को लागी फिट छ व्हीलचेयर एक बाक्लो को आवश्यकता बिना व्हीलचेयर कुशन। थप पढ्नुहोस् एस आकार आसन सही मिलान हेर्न किन यो सबै को लागी कुशन को हाम्रो छनौट हो S-ERGO's.
USUB - प्रतिस्थापन व्हीलचेयर तकिया UPC#
18 × 20 ×4मा